Guri, guri | February 2020
Sidee loo kaxeyn karaa? Diyaargarowga eeyga: sida looga baxo iibka iyo daaweynta dadka, daaweynta ka hortagga
Dhibaatada degdegga ah ee dhammaan milkiilayaasha xayawaanka ah waa dagaalka ka soo horjeeda boodada, taas oo xayawaanku qaadi karaan inta lagu socdo waddada. Waa lagama maarmaan in la qaato muuqaalka cayayaanka sida ugu macquulsan, maxaa yeelay waxay sababi karaan dhibaatooyin badan, waxaa lagula talinayaa in si dhakhso ah loo bilaabo daaweynta. Mid ka mid ah calaamadaha ugu muhiimsan ee caabuqa waa xaalad farxad leh oo joogto ah, daaweyntu waa inay noqotaa mid dhamaystiran.
Oo waa la wada qaboojiyey oo la bogsadey! Shaambo shaambo ah eeyaha dadka waaweyn iyo ubadka
Qof kasta oo eeyaha ku haya guriga wuxuu yaqaanaa dhibaatada boodada iyo shilinta ka timaada waqtiga timaha timaha xayawaanka. Kuwani ma ahan cayayaanka kaliya ee keena xayawaanka, waxay yihiin kuwa sidayaal ah oo infekshin leh waxayna keeni karaan cuduro. Waqti dheer ayaa ah maalmaha aad ku qasbaneyd in aad sameysid dabeecad si aad uga saarto dulinyada waxyeelada leh.
Cawaaqib xumo maaha! Xoog ayaa ku qaylinaya nin leh sawir
Dheecaanku waa yar yihiin, laakiin aad u xun oo ku dhasha dhiig-sumoobid dhiig oo nuugaya oo keena dhibaatooyin badan oo aan ahayn xayawaanka, laakiin sidoo kale dadka. Sidee loo aqoonsan karaa qaniinyada cayayaankaas? Muuqaalka muuqaalka Dheecaanku waa mid aad uga duwan kan dhiigga kale ee muuqaalkiisa ah. Dhererkoodu wuxuu qiyaastii 3-5 mm, markaa way adag tahay in la ogaado cayayaankaas.
Dhibaato weyn u leh dadka yar yar! Diyaargarow ilmuhu wuxuu ku qaniinaa khatarta, waxa la sameeyo, iyo sidoo kale sawiro
Qoomamo Faafidda in boodada - dhaxalka keliya eyda iyo bisadaha. Si kastaba ha ahaatee, soo bixiyey by xayawaanka guriga, cayayaanka waxay sababi kartaa dhibaatooyinka arrin halis ah - iyo gaar ahaan carruurta. Sidaa darteed waxaan fahmi doonaa marka qaniinyada qaniinyada ay khatar u yihiin carruurta. Maxay khatartu u cararaysaa caruur badan oo qaangaar ah?
Maxaad ka saaraysaa? Dhaqdhaqaaqa xayawaanka ee eeyaha: waxa la samaynayo, buufinada wanaagsan, silsiladaha iyo shaambada
Milkiilayaasha eeyda ayaa badanaa la yaabay, iyagoo fiirinaya amarka xayawaankooda joogtada ah. Dhanka kale, wax walbana waa la sharaxay. Si loo fahmo sababta keenta dabeecadda aan la fahmin eey, waa ku filan in la eego jaakadeeda ujeeda boodada iyo shilinta. Kuwani waa dulinka ugu caansan jidhka xoolaha.
Ka ilaali xoogga! Diyaargaroobidda nabarrada
Akhristayaashu waa kuwa ugu badan ee ay u egyihiin ehelada eeyaha. "Ku safrida" mid ka mid ah xayawaan kale, waxay ku faafinayaan farabadan oo dhan cudurada faafa: Gooryaanka, xummad isdaba-joog ah, boodhka tufaaxa iyo kuwa kale. Qaniinyada boogaha waxay keenaan cuncun aan xishood lahayn oo xayawaanka ah iyo rabitaanka si dhaqso ah loo yareeyo dhibaatada haysta xayawaanka mulkiilaha.
Waxay ka badan yihiin waxay u muuqataa! Noocyada boodada sawirada
Diyaargarowgu waa cayayaanka la og yahay bini-aadanka tan iyo wakhtiyadii hore. Wax walbaa ka hortagtaa cayayaanka aan cirib-tirka laheyn ee ka imanaya masaafo weyn. Waxay si fiican u boodaan waxayna si sahlan u dhaqaajinayaan siddoo kale, sida eeyaha ama shimbiraha, meel kasta oo masaafada ah. Xiniinyaha waxay ku quudiyaan dhiig, taas oo kordhisa heerkooda khatarta ah ee bani-aadamka, waxay awoodaan in ay adkeeyaan cudurada halista ah.
Waxay ku jiraan beerta! Boodada geedaha iyo sida looga takhaluso
Raaxo la'aanta ah in qofku ka heli karo cayayaanka kala duwan ayaa adkaata in la barbaariyo. Badanaa, hal nooc oo martida aan la socon ayaa si xoog leh u garaaci kara dareenka, iyo maxaan xitaa sheegi karnaa marka ay bilaabaan inay u dhaqmaan sida deriska ama, xitaa ka xun, waxay arkaan ilaha cuntada ee dadka. Taasina waa sababta mar kasta oo taariikhda aadanaha ah ay jiraan siyaabo badan oo cusub oo loola macaamilayo kuwa iyaga ka soo muuqan kara guryaha iyo beeraha.
Daryeelka "dhagxaan nool"! Liisaska guriga
Malaayiinno waa noocyo badan oo qurux badan oo ku nool degaannada Afrikaanka ah ee dhagaxa leh. Magacyadoodu waxay tarjumayaan "dhagax nool". Waxaa jira qiyaastii 30 nooc iyo 60 subspecies. Midabka aan caadiga ahayn iyo adkaysiga xaaladaha dabiiciga ah ee dabiiciga ah ayaa soo jiidanaya dareenka beeralayda beeraha ee adduunka oo idil. Daryeelka sahlan ee suurtogalka ah ayaa suurtogal u ah inuu ku koro ubax guriga.
Lamaanadaha boodada ma yihiin? Earthen boodbood: muuqaalka sawirada iyo sida looga takhaluso guriga
Burburkii dhuleedku waxba kuma laha boodhka dhabta ah. Waxay dhab ahaantii ka jilicsan yihiin qoys ballaaran oo ka mid ah kuwa lamid ah caleen iyo ka mid ah cayayaanka dhirta. Dunida Dunida ma qaniinayso dadka, laakiin waxay awood u leeyihiin inay soo galaan gurigana degaan. Muuqaalkani wuxuu ka mid yahay noocyada lamid ah ee ku jira amarka Coleoptera.
Beeralayda casriga ah, Lithopia ayaa si gaar ah caan u ah - succulents ka qoyska qoyska Aizovs. Dadku waxay ku heleen magaca "dhagax nool". Dadka deggan wadamada yurub, dhirtaas waa dhif. Kharashka hal nuqul waa mid aad u sarreeya. Ubaxa xun wuxuu u adkeysan karaa gaadiidka isla markaana si lama filaan ah ugu dhintaa gacanta milkiilaha cusub.
Qolka Balsam - maxaad u barakeysan tahay iyo waxa la qabanayo? Talooyin ku saabsan daryeelka guriga iyo koritaanka!
Balsam-cawlan - arag qurux badan. A caafimaad leh, warshad xoog leh, sida caadiga ah, wax kasta oo lagu daboolay burooyinkeeda jilicsan ee sanadka ku dhowaad. Hase yeeshee dhammaan beeraha ubaxa waxay samayn karaan "Vanka qoyan" ama "Spark" (sida loo yaqaan) ubax. Maxaa loo baahan yahay? Tani waxa laga doodi doonaa maqaalkan.
Waxaan ku koraynaa "dhagxaan nool": carrada ku habboon beeraha iyo dhirta ku habboon ee Lithopia.
Liisaska waa dhirta ornamental qurxoon, oo loo yaqaan "dhagxaanta nool", sababtoo ah midabkooda iyo qaabkooda waxay u eg yihiin dhagaxyo, laakiin waa geedo nool. Qiyaastii 37 nooc oo warshadaan ah ayaa lagu yaqaanaa dabeecadda. Waxaa lagu sheegi karaa in Lithopops waa suunka, oo ka kooban laba caleemo cufan oo la baddalay, ku biiray hoos.
Supersucculent Wonderful: sharaxaad iyo sawir nooc kasta oo Lithopops ah
Noocyo kala duwan oo la isku qurxiyo iyo noocyo kala duwan leh, noocyada kala duwan ee noocyada kala duwan, ee ku haboon qaababka isku dhafan. Ku beeray mid ka mid ah dhirta yaryar ee midabada kala duwan, waxay kuu oggolaaneysaa inaad abuurto xiiso iyo xiiso leh walwal kasta. Marka xigta, waxaad baran doontaa sida aad uga kori lahayd miraha of Lithos pseudotruncatella iyo sida daryeelka guriga for kala duwan Mix ayaa la fuliyaa.
Iska ilaali caarada caarada: cayayaanka caarada ah: sida loo maareynayo cayayaanku ku faafay balsam?
Balsam (Vanka qoyan, Impatiens) - mid ka mid ah dhirta ugu caansan ee beerta. Laakiin wuxuu leeyahay hal dhibic: wuxuu u maleynayaa inuu ku dhaco infekshan caaro. Tani waa cayayaan aan fiicnayn oo keeni karta dhibaato aan loo baahnayn oo kaliya in ay tahay balsamic, laakiin sidoo kale dhirta ku dhow. Dheecaanku wuxuu ku quudiyaa dheecaanka ubaxa, si firfircoon u faafiya, waana yar yahay in la helo.
Maxaa ku dhacay balsamic, maxaay caleemaha u dhacaan oo ku dhacaan jirro iyo sida loo badbaadiyo ubaxa?
Wixii korriin ah, xaalad kasta oo noolaha ah ee xayawaanka uu marwalba marwalba walaacsan yahay. Balsam ayaa ka baxda taas oo isbeddelay muuqaalkeedii u sheegi lahaa mulkiilaha dhabta ah ee pathology uu saameeyey geedka. Waqtigaas, calaamadaha lagu arkay - ballan qaad si loo badbaadiyo ubaxa dhimashada. Caleemaha dhirta buka ayaa qalaji kara, bedeli kara midabka, lafdhabarta, noqotaa meelo daboolo oo hoos u dhaco.
Balsamku wuxuu qabaa dhibaato, ama sababta saboolka iyo ubaxa ay u dhacaan - xalka iyo tallaabooyinka ka hortagga
Balsam waa geedo keli ah oo dhoobo ah oo leh habab adag oo toosan. Laakiin mararka qaarkood waxay dhacdaa qaab ah nus ah. Dadka balsam waxaa sidoo kale loo yaqaan "Roly moet" ama "taabasho". Waxaa jira xaalado marka burooyinkeeda iyo ubaxyada ubaxan ee warshadani si firfircoon u dhacaan. Xaqiiqadani waxay dhalisaa korriinka si ay uga welweliso caafimaadka daaqadda guryaha.
Impatiens: sida loo biyo iyo quudiyo dhirta si ay u bogaan ubax muddo dheer?
Balsam - mid ka mid ah dhirta ugu caansan ee gudaha, waxaa sidoo kale loo yaqaan 'asterisk, light, Vanka-vstanka, Vanka qoyan, ka baxsan. Ubax Tani waxaa loo yaqaanaa noocyada kala duwan ee noocyada, kala duwan ubax badan, mararka qaarkood xitaa jiilaalka, iyo daryeelka aan qabyo ahayn. Waxay ku jirtaa ubaxyo fudud ama laba jibbaar ah midab kala duwan, mararka qaarkood waxay leedahay laba midab oo midab leh.
Nidaamka dhalista Balsam: goorma, sidee iyo dhibaatooyinkee ayaad filan kartaa?
Balsam - mid ka mid ah dhirta guriga ugu caansan. Waxa uu muddo dheer degay daaqadaha qoob ka ciyaarka ubaxa iyo, iyada oo daryeel ku habboon, ma daalinaynin isha oo isha ku haysa cagaar jilicsan iyo ubaxyo dhalaalaya. Vanka waa qoyan yahay, taabacsan, iftiin, asterisk, caleemo waa magac caan ah oo ah balsam. Balsam Homeland - Bariga Afrika.